Tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho oo gaartay 32 ruux • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho oo gaartay 32 ruux
Tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho oo gaartay 32 ruux
November 9, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qaraxyadii isxig xigay ee maanta ka dhacay agagaarka wadada KM4 ee magaalada Muqdisho tirada dadka ilaa iyo iminka la xaqiiyay in ay ku geeriyoodeen qaraxyadan ayaa la xaqiijiyay in ay dhan yihiin 32 ruux.
Inta badan qaraxyadan ismiidaaminta ayaa waxa ay ka dhaceen afaafka hore ee Hotel Saxafi oo ay hormarto wadada KM4 taasoo loo sababaynayo in ay dadka ku waxyeeloobay ay noqdaan dad rayid ah oo isugu jira qaar wadada isticmaalay oo gaadiid saarnaa iyo qaar ka agdhawaa halka ay qaraxyadu ka dhaceen oo ka shaahaynayay maqaaxiyaha kaabiga ku haya hotelka.
Laamaha amaanka ayaa dhankooda sheegaya in ay toogteen lix kamid ah dableydii qaraxyadii ka dambeeyay oo isku dayay in gudaha u galaan hotelkai sida uu sheegay Qaasim Axmed Rooble oo ah afhayeenka ciidamada Booliska Soomaaliya.
Sawiro laga soo qaaday halka ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa muujinayay baaxada ay le’eg yihiin khasaaraha ka dhashay qaraxyada ismiidaaminta ah.
Mid kamid sawirada laga qaaday goobta qaraxa ayaa muujinaya burbur lixaad leh oo soo gaaray gaari nooca dadweynaha ay adeegsadaan oo uu haleelay mid kamid ah qaraxyada dhacay waxaana la sheegayaa in ay ku le’deen badi dadkii saarnaa.
Dadka qaraxyada ku waxyeeloobay waxaa kamid ah Cabdirisaq Bahlaawi oo horey u soo noqday Agaasimaha Wasaarada Warfaafinta xukuumada Soomaaliya waxaa la sheegayaa xilligii uu qaraxa ka dhacayay uu ku sugnaa meel aan ka fogeen Hotelka sida ay sheegeen laamaha caafimaadka haatan waxaa xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayaa mid kamid ah Isbitaallada Muqdisho.
Al-Shabaab oo waxyar kadib markii ay qaraxyadan dhaceen baraha ay wararkooda ku faafiyaan waxa ay ku sheegateen mas’uuliyadda weerarkan iyo qaraxyadan ka dhacay KM4 waxay sidoo kale sheegteen in ay beegsadeen Hotelka ay daganyihiin saraakiil amni xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, iyo mas’uuliyiin ka tirsan Dowlada.
La soco wixii kasoo kordha qaraxyadan